सुर्खेतको राउटे बस्तीमा पुग्यो खुसी, पुरा भयो उनीहरुको माग ? (भिडियो हेर्नुस्) – List Khabar
Home / समाचार / सुर्खेतको राउटे बस्तीमा पुग्यो खुसी, पुरा भयो उनीहरुको माग ? (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 16, 2021 समाचार Leaveacomment 87 Views
काठमाडौ । सामाजिक अभियन्ताको रुपमा परिचित हेमराज थापाको समुह सुर्खेत स्थित राउटे बस्तीमा रा हत लिएर पुगेका छन् । उनीहरु खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
केही दिन अघि राउटे समुदाय कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भेट्न पुगेका थिए । मन्त्रालयमा पुगेका उनीहरुले आफुहरुलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्री सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सुर्खेतमा राउटे परिवार पुगेर सहयोग मागेका थिए । सरकारी सहयोग नपुग्दै थापाको समुह राह त लिएर पुगेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीसंगको भेटमा राउटे समुदायले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको अभाव भएको भन्दै सहयोगका लागि मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले राउटे समुदायको संरक्षण एवं खाद्यान्न लगायतको सामाग्री सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राउटे समुदायका युवतीहरुमाथि भएको घ टना बाहिरिएपछि उनीहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले राउटे वस्तीमा अन्य व्यक्तिहरुलाई जान रोक लगाएको हो । तर पनि वाहिरका ब्यक्ति उनीहरुको सम्पर्कमा जाने प्र यास भने जारी राखेको देखिन्छ । भिडियोमा युवतीहरु माथि भएको घटना सा र्वजनिक भएपछि उनीहरुका बारेमा थप चा सो बढेको छ ।
Previous आज देशका यी स्थानमा ठुलो पानी पर्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह
Next अब सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी !